War deg deg ah dabley hubaysan oo dad shacab ah oo beeraley ah ku laayay degaanka heemaal oo hoosyimaada degmada saylac ee gobolka Salal. | Gabiley News Online
War deg deg ah dabley hubaysan oo dad shacab ah oo beeraley ah ku laayay degaanka heemaal oo hoosyimaada degmada saylac ee gobolka Salal.
September 17, 2019 - Written by maxamed jeex
Dableydan ka soo talowdey xuduuda dalka Ethiopia & Djibouti oo dad reer somaliland ah ku diley degaanka heemaal nimankaa dilka geystey oo la sheegaayo iney u baxsadeen dhinaca dalka jabuuti oo ah dhanka looga soo dhiibey hubka ay ku dileen dadka.
Beelaha dega heemaal oo ah bahabar celi ayaa la soo sheegayaa iney wacad ku mareen sidii ay u aargoosan lahayeen maadaama si cad oo badheedh ah lagu laayey dadkayagii.
Wararka ka soo baxaaya dadka degan heemaal waxay sheegayaan in beelaha bahabarceli ay diideen iney aasaan marxuumkii shaley ay dileen budhcadii beesha ciise ee ka soo talowdey xuduudaha dalalka jabuuti & Ethiopia
Xaaladu aadbay u kacsantahay dhamaana beelaha gadabuurssi weyne aadbay uga xumadeen gardarada beesha ciise ee laga soo hubaynaayo dalka jabuuti,waxay wararku shegayaan in haddii ciise joojin waayo gardaradan garabka,og.
Wararka naga soo gaadhaaya degaanka heemaal ee beelaha bahabarceli ayaa aad uga cadhaysan ninkii beertiisa lagu dhaxdiley shaley oo ay dileen ciise ka soo talaabay xuduudaha Ethiopia & jabuuti .
Beelaha bahabarceli waxay dusha ka saarayaan dilkii shaley ka dhacay heemaal iney masuul ka yihiin dawlada Somaliland maadaama ay ogayeen gadarada ay wadeen beryahan denbe beesha ciise taasi oo marar badan aan uga degney.
Guntii & gabagabadii waxaa isa soo taraaaya in xaalada degaankaasi aa u kacsantahay beelaha laga diley marxuumka ay aad uga cadhaysanyihiin sida badheedhka ah ee loo diley wiilkooda oo beertiisa qodanaayey.
xafiiska wararka gobolka Salal .gabileysnewsonline.com